Author Topic: ကိုကိုထွန်းအေးတင်တဲ့ဟာသများ (Read 243318 times)
« Reply #190 on: May 25, 2011, 01:16:40 PM »
" ပြန် လာ ပါ ရ စေ "
ချစ်တဲ့မောင့်ကို မေ စွန့် ခွါသွားမိတဲ့အတွက် ခံစားနေရတဲ့ ဝေဒနာကို မေ့အနေနဲ့စာရေးလို့ မဖော်ပြတတ်အောင်
ပါပဲ မောင်..၊ ကိုယ်တစ်သက်လုံး ဆက်ချစ်နေမဲ့ ယောင်္ကျားကို ပစ်လိုက်မိလို့အမိုက်မလေး အခုထိ နောင်တရနေ
ဆဲပါမောင်..။ မောင် မရှိဘဲ မေ မနေနိုင်ဘူးမောင်..။ မေ့ကို ခွင့်လွှတ်ပါ..။ မေ နဲ့ မောင် လက်မထပ်ခင် တစ်ရက်အ
လိုမှာ တစ်ခြားယောင်္ကျားတစ်ယောက်နောက် ကောက်ကောက်ပါအောင် လိုက်သွားမိတဲ့ မိန်းမရိုင်းကို ခွင့် လွှတ်ပါ
မောင်....။ မေ အမှားကြီး မှားမိပါတယ်.။ မောင် မရှိတဲ့ မေ့ရဲ့ ဘ၀ဟာ အရှင်လတ်လတ် ငရဲပြည် ရောက်နေတာနဲ့ 
အတူတူပါပဲမောင်..၊ မောင့်ကို မေ ချစ်တယ်..။ ချစ်တယ် ..၊ ချစ်တယ်..။
မောင့်ရဲ့မေ
PS... မင်္ဂလာစုံတွဲထီ ပေါက်တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းကြားရတဲ့ အတွက် မောင်နဲ့ ထပ်တူ မေလည်း ၀မ်းသာပါတယ်..မောင်
« Reply #191 on: May 25, 2011, 01:53:45 PM »
" လူ နာ သစ် "
ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ရောက်လာသည့် လူနာကို စိတ်ရောဂါကု ဆရာဝန်က ပြောသည် ။
" ဘာမှ မစိုးရိမ်ပါနဲ့ ..။ တစ်လောက ဘာမှ မဟုတ်တဲ့ ကိစ္စလေးတစ်ခုကြောင့် စိတ်သောက ရောက်နေရတဲ့
လူနာတစ်ယောက်ကို ကျနော် ပျောက်အောင် ကုပေးလိုက်ပြီးပြီ...? သူ့ အဖြစ်က ရယ်စရာလည်း အကောင်းသား
သွားကု ဆရာဝန်ကို ပိုက်ဆံ မပေးလိုက်မိတဲ့ အတွက် ညည အိပ်မပျော်ဘူးတဲ့ ဗျာ..၊ ကျနော့်ဆီ လေးငါး ခါပဲ
လာလိုက်ရတယ်..ဒီနေ့ ဆို လုံးဝ ပျောက်သွားပြီ.."
" ကျနော် သိပါတယ်ဆရာ..၊ ကျနော်က သူ့ ရဲ့သွားဆရာဝန်ပါ.."
" အ ထူး ကု ဆေး ရုံ "
စိတ်ရောဂါ အထူးကုဆေးရုံအကြောင်း ဆောင်းပါးရေးမည့် သတင်းထောက်ကို ဆေးရုံအုပ်ကြီးက အဆောက်အဦး၏
တစ်ထပ်ချင်းကို လိုက်ပြသည် ။ နောက်ဆုံးအထပ်သို့ရောက်လာသည် ။ ဆေးရုံအုပ်ကြီးက လူနာထားသည့် အခန်း
တစ်ခန်းကို ဖွင့်လိုက်သည် ။ အခန်းထဲတွင် လူနာ တစ်ယောက်မှ မရှိချေ..။ ကုတင်နှစ်လုံးသာ ရှိနေသည် ။ သတင်း
ထောက်က အံ့အားသင့်စွာ မေးသည် ။
" အခန်းထဲမှာ လူနာ တစ်ယောက်မှ မရှိပါလား.."
" ဒီအခန်းက မော်တော်ကားရူး ရူးနေတဲ့ လူနာတွေကို ထားတဲ့ အထူးခန်းပါ.."
" လူနာတွေ ဘယ်မှာလဲ ခင်ဗျ.."
" ဘယ်မှာ ရမလဲ..။ ကုတင်အောက်မှာပေ့ါ..။ သူတို့ ကားကို သူတို့ ပြင်နေကြတယ်လေ.."
« Reply #192 on: May 25, 2011, 02:15:08 PM »
" ဒါ မှ မ ဟုတ် "
မိန်းမငယ်တစ်ဦး အမျိုးသမီးဆရာဝန်မထံ ရောက်လာပြီး ပြောသည် ။
" ဒေါက်တာ..ကျမယောင်္ကျားဟာ သူ့ ရဲ့ယောင်္ကျားတာဝန်ကို ကျမ ကျေနပ်အောင် မဖြည့်ဆည်းဘူးရှင့်.."
ဆရာဝန်မ က မိန်းမငယ်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးသည် ။
" ရှင့်ဆီမှာ ဘာချို့ ယွင်းချက်မှ ကျမ မတွေ့ ဘူး..နောက်တစ်ရက် ယောင်္ကျားကို လွှတ်လိုက်ပါ.."
နောက်တစ်ရက် ယောင်္ကျား ရောက်လာသည် ။ ၄င်းကို ဆရာဝန်မ စစ်ဆေးသည် ။ ထို့ နောက် မေးနေကျပုံစံမျိုးဖြင့်
" တစ်နေ့တစ်နေ့အချိန်ဘယ်လို ကုန်သလဲဆိုတာ ပြောပြစမ်းပါ.."
" မနက် ရုံးကိုသွားတယ်..၊ လမ်းမှာ အသိအမျိုးသမီးတစ်ယောက်က သူ့ ကားကို ရပ်ပြီး " ရှင် ရုံးကို သွားမှာလား..
ဒါမှ မဟုတ် ..." ဆိုပြီး အဓိပ္ပါယ် ပါပါမေးတယ်..။ ကျနော် " ဒါမှ မဟုတ် " ကို ရွေးလိုက်တယ်..."
" ရုံးကို ရောက်တော့ အတွင်ရေးမှူး မ က ကြိုနေပြီး " အကိုကြီး ..အလုပ် လုပ်မှာလား..ဒါမှ မဟုတ် " ဆိုပြီးပြော
ပြန်ရော....ကျနော် " ဒါမှ မဟုတ် " ကိုရွေးလိုက်တယ်.."
" ညနေကျတော့ အိမ်ကိုပြန်လာတယ် ။ ကိုယ့်အိမ်ခန်းကို မ၀င်ခင် ဘေးခန်းက အိမ်နီးချင်း အမျိုးသမီး ထွက်လာပြီး
" ဘယ့်နှယ့်လဲ..အိမ်ကို တန်းဝင်မှာလား..။ ဒါမှ မဟုတ် ..." လို့ မေးတယ်..။ " ဒါမှ မဟုတ် " ကို ကျနော်ရွေး
" ကိုယ့် အိမ်ခန်းထဲရောက်တော့ မိန်းမက " ရှင် အိပ်မှာလား...။ ဒါမှ မဟုတ် " ဆိုပြီး ကျနော့် အဖြေကို စောင့်တယ်.
ဒီတစ်ခါမှာတော့ ကျနော် ထိုးအိပ်လိုက်တော့တယ်..."
အမျိုးသမိး ဆရာဝန်မ က ချက်ချင်း မေးခွန်းထုတ်သည် ။
": ကိုင်း...ရှင် ကုမှာလား..။ ဒါမှ မဟုတ်...."
« Reply #193 on: May 26, 2011, 01:22:39 PM »
" အိပ် မက် ထဲ က လို ဖြစ် ရင် ကောင်း မယ် "
" ဆာရာ....ညက ငါ အိပ်မက် မက်တယ် သိလား..။ အိပ်မက်ထဲမှာ မင်းကို ငါ အိပ်ရာထဲမှာ တစ်ကိုယ်လုံး
သိမ်းကျုံးဖက်ပြီး အငမ်းမရ နမ်းတယ်..။ ပြီးတော့ ..ကျန်တာတွေ ဆက်ဖြစ်တယ် သိလား.."
" ဟုတ်လား...အင်း..အိပ်မက်ထဲမှာ ရှင် တော်တော် ယောင်္ကျား ပီသတာပဲနော်.."
" စိတ် အေး စမ်း ပါ "
ကလေး လေးယောက်အဖေ အာဘရမ်တွင် ထူးဆန်းသော အတွေးတစ်ခု ၀င်လာသည် ။ သို့ နှင့် မိန်းမကို
" အငယ်ဆုံးကောင်ဟာ ငါ့သား မဟုတ်ဘူးလို့ငါ ထင်နေတယ်ကွ."
" ရှင် မို့ ထင်ရက်တယ်....သူကမှ ..ရှင့်သား အစစ်ရှင့်.."
« Reply #194 on: May 26, 2011, 02:14:29 PM »
" အ မ င်္ဂ လာ သ တင်း "
မိတ်ဆွေတချို့ နှင့်အတူ ကိုဘမောင် အညာသို့ကုန်ကူးရန် တက်သွားသည် ။ အညာတွင် နေထိုင်မကောင်းဖြစ်ပြီင်္း
ကိုဘမောင် ဆုံးသွားသည် ။ ကိုဘမောင်၏ ဇနီးအား မည်သို့ ပြောရပါ့ဟု မိတ်ဆွေများ တိုင်ပင်ကြသည် ။ တိုက်ရိုက်
ကြီး ပြောလိုက်လျှင် ၄င်း၏ဇနီး ရင်ကွဲပက်လက် ဖြစ်နိုင်သည် ဟု သဘောညီကြသည် ။ သို့ နှင့် စကားကို အလိမ္မာဆုံး
နှင့် အပြေပြစ်ဆုံး ပြောနိုင်သူ မောင်ကောင်းထိုက်ကို တာဝန် ပေးလိုက်သည် ။
မောင်ကောင်းထိုက် မော်လမြိုင်သို့ ရောက်သောအခါ ကိုဘမောင်၏ အိမ်တံခါးကို ခေါက်လိုက်သည် ။ ကိုဘမောာင်၏
ဇနီးက တံခါးကို ဖွင့်ပေးသည် ။ အမျိုးသမီးက မေးသည် ။
" ဘာကိစ္စ ရှိလို့ လဲ.."
မောင်ကောင်းထိုက် ရုတ်တရက် ဘာပြောရမှန်မသိ ဖြစ်သွားသည် ။ ထို့ နောက် အားတင်းပြီး ပြောသည် ။
" ကိ်ုဘမောင်နဲ့ကျနော်တို့အညာကို ကုန်ကူးဘိ်ု့တက်သွားတယ် ဆိုတာ သိပါတယ်နော်."
" သိတယ်..အဲ့ဒါ ဘာဖြစ်လဲ.."
" ကျနော်တို့အမြတ်အစွန်း အများကြီး ရလိုက်တယ်ဆိုတာကော သိသလား "
" သိတယ်..အဲ့ဒါ ဘာဖြစ်လဲ "
" ပိုက်ဆံအားလုံး ကျနော်တို့အရက်သောက်လို့ ကုန်သွားတယ်..။ ကိုဘမောင်လည်း ဒီအတိုင်းပဲ ။ အဲ့ဒါ
ကိုဘမောင် ဇနီး ဒေါသတကြီး အော်သည် ။
" သေချင်းဆိုး..သေသွားရင် ကောင်းတယ်.."
မောင်ကောင်းထိုက် စိတ်သက်သာရသွားဟန်ဖြင့် သက်ပြင်းကို မှုတ်ထုတ်လိုက်ပြီး ပြောသည် ။
« Reply #195 on: May 26, 2011, 02:24:22 PM »
" စုံ ထောက် ၀ တ္ထု "
စာအုပ်ဆိုင်တွင် ဖြစ်သည် ။
" ကျမကို တစ်ချိန်လုံး သည်းထိတ်ရင်ဖို ဖြစ်ရတဲ့ စုံထောက်ဝတ္ထုစာအုပ် တစ်အုပ် ရွေးပေးပါရှင်.."
" ဟုတ်ကဲ့..အဲ့ဒါဆို ဒီစာအုပ်ကို ယူသွားပါ..၊ နောက်ဆုံး စာမျက်နှာ ကျမှ လူသတ်သမားဟာ
အိမ်ဖော်မလေး ဖြစ်ကြောင်း ပေါ်လာတယ်ရှင့် "
" ကူ ညီ ပါ့ မယ် "
ဟင်းသီးဟင်းရွက်သည်ကို အဘွားကြီးက ပြောသည် ။
" အာလူး ငါးပိဿာ ၀ယ်မလို့သမီးရယ်..၊ ဒါပေမဲ့ မသယ်နိုင်မှာ စိုးတယ်ကွဲ့"
" စိတ်ချ အဘွား..၊ အဘွား သယ်နိုင်အောင် ကျမ ချိန်ပေးလိုက်ပါမယ်.."
" လူ နာ ဖတ် ဖို့"
" ကျနော် စာအုပ်တစ်အုပ်လောက် ၀ယ်ချင်ပါတယ်.."
" ဘယ်လို စာအုပ်မျိုးပါလဲ.."
" လူနာဖတ်ဖို့ ပါ "
" သမ္မာကျမ်းစာအုပ် ယူသွားမလား "
" မဖြစ်ဘူးထင်တယ်..၊ ကျနော့် လူနာက ဒီလောက်အထိ ရောဂါ မပြင်းဘူးခင်ဗျ "
« Reply #196 on: May 26, 2011, 02:34:16 PM »
" မ မှန် သ တင်း "
အမျိုးသမီးတစ်ဦး မကျေမနပ်သံဖြင့် မိတ်ဆွေ အမျိုးသမီးကို ပြောသည် ။
" ကျမက ငွေမက်ပြီးတော့ ဦးဘမောင်ကို ယူလိုက်တယ်လို့ပြောနေကြတယ်..။ ဒါ..လုံးဝ မမှန်ဘူး..။
သူ သိန်း ဘယ်နှစ်ထောင် ချမ်းသာတယ်ဆိုတာ အခုအထိ ကျမ အတိအကျ မသိသေးဘူး ရှင့် "
နှစ်ချုပ်အစီရင်ခံစာကို ဖတ်ရင်း စက်ရုံအုပ်ချုပ်ရေးမှူးက အတွင်းရေးမှူး မ ကို မေးသည် ။
" တစ်သန်းကို သုည ဘယ်နှစ်လုံးထည့်ပြီး ရေးရသလဲ "
" သန်းတစ်ဝက် ဆိုရင်ကော "
" ဈေး လျော့ ယူ ခြင်း "
လူငယ်တစ်ယောက် မိမိ အပ်ထားသော ဖိနပ်ကို လာရွေးသည် ။ ဖိနပ်ပြင်သမားက ပြောသည် ။
" ပြင်ခ ၂၀၀ ကျပါတယ်.."
" နည်းလှချည်လား.. ကျနော် လာအပ်တုန်းက လေးရာ ကျမယ်ဆို "
" ခင်ဗျားရဲ့ဖိနပ်တစ်ဖက် ပျောက်သွားလို့ ပါ.."
« Reply #197 on: May 26, 2011, 02:44:40 PM »
" န ပု လ္လိင် "
ကိုချူချာ ကားတစ်စီး ၀ယ်လာသည် ။ တစ်ရွာလုံးက ကားကို လာကြည့် ကြသည် ။ ရွာသားတစ်ယောက်က
ကားကို အသေအချာ ကြည့်ပြီး နောက်ဆုံးတွင် ပြောသည် ။
အားလုံး ထောက်ခံဟန်ဖြင့် ခေါင်းညိတ်ကြသည် ။
နောက်တစ်ယောက်က ကားကို လက်နှင့် ကိုင်ကြည့်သည် ။
" အင်း..သံနဲ့လုပ်ထားတာပဲ.."
အားလုံး ခေါင်းညိတ်ကြပြန်သည် ။
နောက်တစ်ယောက်က အိတ်ဇောပိုက် ( Exhaust pipe ) ကို လက်နှင့် စမ်းပြီး ပြောသည် ။
" အင်း..နပုလ္လိင် ပါလား.."
" ရေ ရော နို့"
" ခင်ဗျား မွေးထားတဲ့ နွားမဆီက တစ်နေ့ ကို နို့ ဘယ်လောက် ရသလဲ.."
" ဆယ် လီတာပါ "
" ရောင်းတော့ကော "
" ရောင်းတော့လည်း ဆယ်လီတာပဲ ရောင်းတယ်..၊ ဒီ့ထက် ပိုမရောင်းနိုင်ဘူးဗျ..။
အိမ်က ကလေးတွေ သောက်ဖို့၎-၅ လီတာလောက် ချန်ထားရသေးတယ်.."
« Reply #198 on: May 26, 2011, 02:57:57 PM »
" သက် သေ "
အတန်းထဲတွင် ဖြစ်သည် ။ ဆရာမက မေးသည် ။
" ငါးဖယ်ဟာ ဘာလို့ပြားပြားကြီး ဖြစ်နေရတာလဲ "
ပီတာလေး လက်ညှိုးထောင်ပြီး ဖြေသည် ။
" ဝေလငါးနဲ့အိပ်လို့"
" ပီတာ..၊ အခန်းထဲက ချက်ချင်း ထွက်သွားစမ်း.."
ထိုသို့အမိန့် ပေးပြီး ဆရာမက ဆက်မေးသည် ။
" ကျောက်ပုဇွန်ရဲ့မျက်လုံးတွေ ဘာဖြစ်လို့ပြူးထွက်နေရတာလဲ..ဘယ်သူ သိကြသလဲကွယ် "
ပီတာလေး နောက်ပြန်လှည့်ပြီး အော်ပြောသည် ။
" အဲ့ဒါတွေ အားလုံးကို သူမြင်လိုက်မိလို့"
" ဖေ ဖေ "
ရုံးမှ ပြန်လာသော ယောင်္ကျားကို မိန်းမက ၀မ်းသာအားရ ဆီးကြိုပြီး ပြောသည် ။
" ကိုဘမောင်ရေ..ကျမတို့ သားလေး လေ.." ဖေဖေ " ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ဒီနေ့ပထမဆုံအကြိမ်
" ဟေ..ဟုတ်လား.. ဘယ်မှာ ပြောတာလဲကွ "
" တိရစ္ဆာန်ရုံထဲက မျောက်ဝံထားတဲ့ လှောင်ချိုင့် အနားမှာ "
« Reply #199 on: May 26, 2011, 03:30:42 PM »
" အ ဖြေ မှန် "
ဇီဝဗေဒဘာသာရပ်ကို သင်ကြားနေချိန်တွင် ဖြစ်သည် ။ ဆရာက တပည့်များကို ပြောသည် ။
" တပည့်တို့ ကို ဆရာ စကားထာတစ်ခုဖွဲ့ မယ်..သေသေချာချာ နားထောင်ကြ "
" မိကျောင်း နှစ်ကောင် ပျံသွားကြတယ်..၊ တစ်ကောက်က အစိမ်းရောင်...နောက်တစ်ကောင်က
အာဖရိကတိုက်ဖက်ကို ဦးတည် ပျံသွားတယ်..၊ ဆရာ့ အသက်ဘယ်လောက်လဲ "
ကျောင်းသား အားလုံး ငြိမ်နေကြသည် ။ နောက်ဆုံးခုံတွင် ထိုင်နေသော ပီတာလေးက ပြောသည် ။
" ဆရာ့ အသက် ၂၄ နှစ် "
" မှန်တယ် ၊ မင်းတော်တယ်..၊ ဒါနဲ့မင်း ဘယ်လိုလုပ် သိသလဲ.."
" ကျနော့် အသက် ၁၂ နှစ် ရှိပြီ..၊ ပြီးတော့ ကျနော့်ကို ဦးနှောက်တစ်ဝက် ချောင်နေတဲ့ အကောင်လို့ 
အားလုံးက ပြောကြတယ် "
" အ ကြောင်း မဲ့ မ ဟုတ် ပါ "
" ပီတာ..နားထောင်စမ်း.၊ တို့ အိမ်က ခွေးက ဟောင်လှချည်လားကွ.ဟေ "
" ဒီခွေးအို အကြောင်းမဲ့ မဟောင်တတ်ပါဘူး ဖေဖေ....မဟုတ်မှ လွဲရော
ကျနော်ဆို့ ဆီကို ကျောင်းအုပ်ကြီး လာတယ်ထင်တယ်...."